Jobily faha-25 taona niaraha-miasa tamin'ny Mpitandrina RAZAFINIARIVO Fidison Maxime mivady - Ambatonakanga - FJKM Tranovato Ambatonakanga
« Fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony hataon’ny olona mbola hampamoahina » Heb13.17b
Ho aminareo anie ny fiadanana avy amin’ Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo. Ho fanomanana ny fankalazana ny jobily manomboka ny 12 aprily ka hatramin’ny 03 may 2020, dia ireto ry havana misy fiaraha-miasa izay hanentanana antsika zanaky ny fiangonana, na eto am-pitandremana izany, na any am-pielezana:
1- HIRA FANEVA
Antsoina sy asaina ireo rehetra nomen’ Andriamanitra fahasoavana manokana amin’ny famoronan-kira mba hanolotra hira faneva hoentintsika hiderana ny Tompo mandritra ny fotoan-jobily. Toy izao ny andinindininy :
– Hira mientanentana
– Andininy ROA sy fiverenana IRAY
– Mirakitra ny teny faneva ao amin’ny Heb 13.17b
– Atao anaty raki-kira (CD na Clé USB + solfa)
– Atolotra ny Komity na aterina ao amin’ny sekretera mpandraharaha farafahatarany ny 16 febroary 2020.
Afahana manomana ny takela-pahatsiarovana, dia asaina isika haka ny takelaka fisoratana anarana eo amin’ny trano heva; hameno izany ary hamerina izany isaky ny alahady maraina hatramin’ny 15 martsa 2020.
Hotanterahina ny alahady 22 martsa 2020 izao eny amin’ny Espace Ny Tiana eny Lazaina ny sakafom-pankalazana izay anasana antsika rehetra. Ny tapakila fanasana dia efa azo raisina any amin’ny mpikambana rehetra mandrafitra ny Komity ary koa eo amin’ny trano heva amin’ny vidiny Ar 50 000.
Ny fototry ny fanambadiana kristianina